Hitachi ZX690LCR-7 & Mashiinka Xad dhaafka ah - Komatu's Sumo Dozer | MAKIINADDA ACE
Hitachi ZX690LCR-7 & Mashiinka Xad dhaafka ah - Komatu's Sumo Dozer
Taas oo la soo saaraysa qodista iyo mashiinka dhismaha, waxaa jira alaabooyin aad iyo aad u tiro badan oo ku habboon xaaladda kala duwan ayaa la sameeyay, waana kuwan wararkii ugu dambeeyay ee mashiinka ka socda Earthmovers.
Hard Hit - Hitachi ZX690LCR-7
Eoghan Daly wuxuu booqday waxa la rumeysan yahay inuu yahay kii ugu horreeyay ee Dash 7 ee Hitachi Construction's 690LCR qodista si uu ugu adeego Yurub, isagoo ka shaqeynaya Live Work Grow ee goobta Central Park ee Dublin.
Mashiinka dhalaalaya ee liinta leh waxaa iska leh Shannon Valley Group waxaana ku shaqeeya matoor u hoggaansan qiiqa qiiqa 5 oo soo saaraya 348kW iyo 2,050Nm oo mashiin ah 1,300rpm. Miisaanka 71.7 tan ee qodista ballaaran, 690LCR wuxuu muujiyey waxtarkiisa kala goynta dhagax adag oo ay la socdaan Rammer C130 iyo lifaaqyada hammaarka ee Epiroc.
Halyeeyga Tom Reilly ayaa u sheegay Eoghan, “Hitachis marwalba wuxuu ahaa mashiinada runta ah ee Dash 7-kan cusub xitaa wuu ka fiican yahay. Sida had iyo jeerba, waxay leedahay qaab-dhismeed kontorool oo aad u fiican oo aadna ugu siman baallayaasha. ”
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Hitachi ZX690LCR-7 iyo hawlgalka Dublin ee Shannon ee Magazine Earthmovers.
Mashiinka Xad dhaafka ah - Komuu Sumo Dozer
Bishii Nofeembar 2020 ee MUQDISHO DHULKA (oo la bilaabay Oktoobar 2nd), David Wylie wuxuu dib u eegay nooca ugu dambeeyay ee Komatsu Europe ee 112-tanne D475A-8, oo ah dozer adduunka ugu weyn, kana shaqeynaya qodista Narva ee Estonia.
Si aad halkaas u timaado, mashiinkan qaaska ah waxaa laga soo daabulay warshada Osaka ee Komatsu qaybo ka mid ah waxaana la geeyay dekedda Zeebrugge ee dalka Belgium. Qaybaha ayaa markaa loo kaxeeyay 2,300km gawaari xamuul ah Komatsu's Baltem As dealer ee Estonia, halkaas oo si buuxda loogu soo uruuriyay aqoon isweydaarsiga goobta.
Nooca 'Dash 8' ee 'D475A' waxaa ku shaqeeya matoor Marxalad 5 ah oo soo saaraya 934hp horay u socodka iyo 1,040hp gadaal. Iyada oo leh laba laab jeexjeex ah U daab iyo ripper weyn, nooca halkan lagu sawiray ayaa culeyskiisu gaarayaa 115 tan!